Dr. Baadiyow: “Farmaajo haku cibra qaato cashirka taariikhda” | KEYDMEDIA ONLINE
Dr. Baadiyow: “Farmaajo haku cibra qaato cashirka taariikhda”
Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow, oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliya, ayaa sheegay, in Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, uu u baahan yahay inuu ku cibra qaato sooyaalkii hore.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiye ku-xigeenka National Forum Party ‘NFP’, Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow, oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed, ayaa sheegay in hoggaamiyaha dadkiisa la heshiin waaya, aysan waxba u tari karin nabad uu ka raadiyo dibad iyo dalal shisheeye.
Dr. Baadiyow, oo talo siinayay Madaxweynaha muddadu ka idlaatay, Farmaajo, ayaa xasuusiyay sooyaalka taariikhda, iyo sida ay lama huraanka u tahay in wax laga barto, wuxuuna tusaale u soo qaatay heshiiskii 1988-kii dhex maray Maxamed Siyaad Barre iyo Mengistu Haile Mariam.
“Maxamed Siyaad Barre iyo Mengistu Haile Mariam, ayaa ku heshiiyay Jabuuti 1988-kii, markii ay ku biyo-keeneen Jabhadihii hubeysnaa. Mid kasta wuxuu diidana inuu la heshiiyo dadkiisa, labadaba waxaa riday Jabhadihii, hoggaamiyihii dadkiisa la heshiin waaya, haku cibro qaato casharka taariikhda”. Ayuu yiri Dr. Baadiyow.
Kadib diidmadii dibadda iyo gudaha ee Farmaajo, ka soo food saartay muddo kororsiga uu sameysaty, wuxuu hadda billaabay galaangal siyaasadeed iyo inuu raadiyo cid uu ka gado fikirkiisa ku wajahan ku sii nagaashaha kursiga.